Liifka Povidone odine 10% Jeermiska Jeermiska
Qaab No.: 1L
Noocyo: Daawada Guud ee Kahortaga Cudurada
Qeybta: Kiimikada Kiimikada Sunta ah
Nooca: Fasalka Koowaad
Ciladaha Saameynta Farmacodynamic: Daawado soo noqnoqday
Habka Kaydinta: Caddaynta Qoyaanka
Baakadaha: 1L dhalo caag ah, 15botle / kartoon
Wax soo saarka: 20000 foosto maalintii
Gaadiidka: Badweyn, Dhul
Kartida Bixinta: 20000 foosto maalintii
Povidone Xalka Iodine Jeermiska Caafimaadka Xoolaha
Xeryaha, qalabka iyo nadiifinta wasakhda.
3.Povidone Iodine xalka jeermiska xoolaha: 100ml 500ml 1000ml
Xalka Povidone Iodine jeermiska xoolaha
Iodine iyo fosfoorik aysiidh. Iodine firfircoon 1.8-2.0% (W / W), phosphoric acid 16.0-18.0% (W / W). SHARAXAAD Dareeraha casaanka ah ee buniga casaanka ah. Tilmaamaha
Povidone Iodine Solution Cudurka Jeermiska Xoolaha
Adoo buufinaya. Madhalays ka dhigida xeryaha iyo kawaanka: waxaa la dejiyay xalka 1% -3%.
Bacriminta qalabka: waxaa la dejiyay xalka 0.5% -1%.
Ha loo isticmaalin xayawaanku waxay xasaasiyad ku leeyihiin iodine.
Shaabadaysan oo ku jira meel qalalan, ka ilaali iftiinka.
Iodophor, iodine waxay leedahay awood beddelid awood leh oo si isdaba joog ah u leh hydrogen, taas oo ficillada OH, NH, CH, SH kooxaha ay saameyn ku yeelato noolaanshaha noolaha; isbeddello dilaa ah qaabdhismeedka borotiinka,
enzyme, nucleic; Isku-darka borotiinka ayaa xannibaya; luminta firfircoonida enzymes sifooyinka jireed ee isbeddelka dufanka buuxa, dhaqdhaqaaqa xuubka ayaa hoos u dhacay; barar isdaba-joog ah, isbeddello, waxyeelo qayb ah; lakabka iyo kiliyaha xannibaadda hufan, ee ka dhalata pyridinedicarboxylic acid, DNA, RNA iyo wixii la mid ah ka daadashada; bakteeriyada vivo glucose-6-phosphate dehydrogenase, lactate dehydrogenase,
waxqabadka fosfataseynta alkaline ayaa hoos u dhacay.
Shay kasta oo dawo xoolaha ah oo aan la isticmaalin ama walxo qashin ah oo ka soo jeeda alaabadaas dawooyinka xoolaha ah waa in loo tuuraa si waafaqsan shuruudaha deegaanka.
500ml / dhalo, 1000ml / dhalo
Ma waxaad raadineysaa soo saare wax soo saare iyo qeybiye Povidone Iodine ah? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. DhamaanPovidone Iodine 10waa la damaanad qaaday tayada. Waxaan nahay Shiinaha Asal ahaan WarshaddiiPovidone Iodine 10% Liquid. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Qaybaha Wax soo Saarka: Jeermiska Cunnada> Povidone odine
Povidone Iodine Jeermiska
Povidone Iodine Digaagga
Xalka Povidone Iodine